GAADIIDKA DIGAAGA DHAADHEER: DUKUMENTIYADA LOO BAAHAN YAHAY, DHIBAATOOYINKA INTA LAGU JIRO GAADIIDKA - BEERAHA DIGAAGA
Xeerarka gaadiidka digaagga
Gaadiidka xayawaanka mar walba waxay bixisaa dhibaatooyin badan, taas oo ku xiran baahida loo qabo in la diyaariyo dukumentiyo iyo kuwa ugu qaalisan. Digaagga ma aha mid ka reeban, markaa waa inaad barataa xeerarka aasaasiga ah ee gaadiidka, iyo sidoo kale barashada khatarta suurtagalka ah. Marka xigta, waxaan tixgelin doonaa meelaha fog ee loo oggol yahay in la qaado, wixii dokumentiyada loo baahan yahay tan, iyo sidoo kale sida loo yareeyo cawaaqibyada xun marka lagu jiro gaadiidka xoolaha.
Waxaan ka hadli doonaa wixii dukumiinti ah ee shimbirta waa in lagu diyaariyaa geedi socodka qorshaynta, iyo sidoo kale inta fog ee ay ku badbaadi karto gaadiidka digaagga.
Waa maxay dokumentiyada loo baahan yahay
Si loola socdo digaagga dabaasha ee xudduudaha dalka, waa lagama maarmaan in la diyaariyo dukumeentiyo dukuminti ah:
Ka caawi dhakhtarka dhalada leh shaabad iyo saxeex. Shahaadada waa in ay muujiso in shimbirtu aanay jiranayn, iyo xaaladdeeda caafimaad waxay u oggolaanaysaa gaadiidka.
Dukumentiga shimbirta. Dukumiintiyadu waa inay muujiyaan nooca shimbiraha, nooca, halka laga soo iibsaday, iyo sidoo kale macluumaadka digaagdaba adiga kaa tirsan.
Dukumentiyada gaadiidka. Waa in la caddeeyaa in qaabka aad gaadiidka kuu ogolaanayso inaad u qaadato shimbir shuruud ah oo raaxo u leh, sidoo kale ma abuurayo halista cudurada keeni kara cudurrada faafa. Waxaad sidoo kale u baahan kartaa caawimaad sanduuqyada ama sanduuqyada shimbirta lagu qaadi doono.
Waxaan kugula talineynaa inaad naftaada ku barato noocyada ugu caansan ee ukunta digaaga ee digaagga: Naaneyska cad ee loo yaqaan 'white nickname', nickname super, Golden gold, buluug, buluug, iyo talyaaniga iyo Laceedanzi.
Joogitaanka liisaska liiska kor ku xusan ma xaqiijineyso in laguugu gudbin doono meel baaritaan. Tani waxay sababi kartaa karantiil ku meel gaadh ah ama mamnuucida soo dejinta noocyada shimbiraha qaarkood. Sababtan awgeed, waa lagama maarmaan in la helo horeyba wixii macluumaad ah ee ku saabsan aagga oo ay marin doonto.
Masaafada gaadiidka ugu badan
Masaafada gaadiidka ugu badan ee la oggol yahay waxay ku xirantahay oo kaliya maaha caafimaadka shimbirta, laakiin sidoo kale dukumintiyada. Xaqiiqdu waxay tahay in shahaadada dhakhtarka xooluhu uu shaqaynayo 3 maalmood, siday u kala horreeyaan, waa wax aan suurtagal ahayn in la qaato digaagga muddo dheer xaalad kasta.
Masaafada gaadiidka ee ugu fiican gaadiidka waa 50-100 km, shimbiruna waa inay ku jirtaa wadada ugu badnaan 5 saacadood. Dareemidda macluumaadkaan waxay keeneysaa in si aad ah loo lumiyo xoolaha, iyo weliba faafitaanka cudurka.
Dhibaatada looma xallilin joogsiyada joogtada ah, quudinta ama waraabinta shimbiraha. Sanduuqyada, kuwaas oo ah digaagga, ha u oggolaan in ay si caadi ah u nastaan, iyo qalooca joogtada ah wuxuu keenaa cadaadis daran.
Akhri ku saabsan sameynta coop digaag la qaadi karo oo gacmahaaga ah.
Saacadaha ugu hooseeya - 90x60x30 cm.
Dhammaan derbiyada iyo dabaqadu waa mid adag, oo aan lahayn godad.
Daboolka waa inuu noqdaa qashin, hawo iyo iftiin. Dhexdhexaadiyaha godadka waa inaysan u oggolaan digaag inay madaxa ku dhejiyaan.
Maaddadu waa mid adag oo khafiif ah.
Waa inaan jiri lahayn dhinacyo fiiqan gudaha sanduuqyada.
Tixgeli dhibaatooyinka ugu muhiimsan ee lagu hayo geedi socodka xayawaanka u dhow fog iyo fogaanta.
Xitaa markaad isticmaasho xajmiga ugu habboon ee ugu haboon, waxaa jira dhibaatooyin la xariira dhibaatooyinka shimbiraha. Taasna waa mid aan suurtagal ahayn, maaddaama qalalaasaha, dhawaaqa, meelaha la isku xiran yahay iyo urta aan fiicnayn sababay xaalad shoog ah taas oo shimbirta dhaawacantay.
Waa muhiim! Digaagga waa la dhaawici karaa ama waa la burburin karaa qashin-qubka haddii uu jiro ukumo la sameeyay oo ku dhex jira inta lagu jiro gaadiidka.
Xaaladdu way ka sii daraysaa haddii gaadiidka hore ee nidaamka qiimo jaban la isticmaalo, ama jidka ayaa maraya waddooyinka wadooyinka oo liita. Dhammaan waa in la tixgeliyaa inta lagu jiro gaadiidka, isku dayaya in la yareeyo khatarta.
Lakabka waxaa lagu hayaa xaalado gaar ah (heerkulka, qoyaanka, xaaladaha iftiinka) ee aan dib loo soo celin karin waddada. Maqnaanshaha qiyaasaha loo baahan yahay ee cuntada, biyaha, iyo waliba culeyska walbahaarka ayaa keenaya miisaan culus. Tusaale ahaan, haddii digaaggu uu ka badan yahay 6 saacadood waddada, ka dibna wuxuu lumiyaa qiyaastii 3.5% wadarta guud, iyo saacad kasta khasaarooyinka ayaa kordha.
Sida wax soo saarka ukunta, xaalada waa mid aad u adag: shimbiraha ma jiifin doonaan ukumaha marka ay jiraan xaalado qallafsan ama xaalad shoog ah. Si kastaba ha noqotee, saameyntaasi kuma koobna wadada.
Waxay noqon doontaa mid waxtar kuu leh inaad barato sababta ay digaagga u qaadaan ukun yar, sababta digaagga u qaadaan ugxan leh cagaar cagaaran iyo sababta ay digaagga u qaadaan ukumaha.
Digaagga ayaa diidi kara in lagu qaado dhowr toddobaad ama bilooyin ka dib markii gaadiidka, taas oo ka dhalatay taas oo ay beertu ku dhici doonto khasaaro weyn. Sababtan awgeed, waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo wakhtiga wadada. Miisaanka culus ee digaagga, taasoo ka dhalatay gaadiidka
Hannaanka gaadiidka digaagga ayaa la dhigaa si aan loo karinin, sidaa darteed, jirkoodu ma helayo nafaqooyinka lagama maarmaanka ah iyo fitamiinada waqtigooda, taas oo horseedaysa jirro dheefshiidka. Xaaladdan waxaa ka mid ah jiritaanka walbahaarka, xaaladda dadweynaha ayaa aad u sii xumaaneysa.
Digaagga ayaa laga yaabaa inay bilaabaan inay qabaan shuban, matag, ama dhibaatooyin kale oo la xidhiidha mareenka caloosha. Cudurka dheef-shiid kiimikaadku wuxuu horseedi karaa sii xumaanta baalasha iyo cirridka, iyo sidoo kale hoos u dhaca caabbinta habka difaaca jirka.
Sidoo kale akhri sida loo daaweeyo shubanka digaagga.
Shubanka digaagga - mid ka mid ah cawaaqibka gaadiidka
Sida loo yareeyo saameynta taban
Isticmaalka xannibaadayaasha oo yareeya walbahaarka shimbiraha inta lagu jiro gaadiidka (tusaale, Aminazin).
Qaadashada shimbiraha habeenkii ama maqnaanshaha iftiinka.
Markaad qabato digaagga, waa inaad ku qaadataa baalasha, ee maaha lugaha.
Sanduuq kastaa waa inuu ku jiraa wax ka badan 20 qof.
Waddada waxaa loo fuliyaa sida habka gaadiidku aanu u marin magaalooyinka iyo megalopolis (hawo wasakhaysan iyo dhawaaqyada cabsida leh).
Beeralayda digaaga ah waa inay bartaan calaamadaha iyo daaweynta kala duwan ee lagu dhigi karo dhimashada.
Qorsheynta gaadiidka iyo gaadiidka laftiguba waxay masuuliyad weyn ku saaran tahay qabanqaabiyaha, maadaama ay muhiim tahay in uun wax walba oo dhaqso ah iyo sida uu sharcigu qabo, laakiin sidoo kale in la badbaadiyo xoolaha. Inta badan waxay ku xiran tahay gaadiidka saxda ah iyo baakidhka, sidaas darteed waxa fiican inaad bixiso wax ka badan shimbir dhintay.